Lenovo Z6 Pro wuxuu qaadi doonaa 100 sawir oo MP ah wuxuuna yeelan doonaa afar kamaradood oo gadaal ah | Androidsis
Lenovo ayaa dhowaan xaqiijisay in taleefoonkeeda casriga ah ee soo socda, Lenovo Z6 Pro, si rasmi ah uga bilaabmi doonta dalkaaga hooyo Abriil 23. Ka hor intaanay taasi dhicin, faahfaahin badan oo qalabka ah ayaa lagu muujiyay khadka tooska ah.
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyo, Madaxweyne ku-xigeenka iyo Maareeyaha Guud ee Shirkadda Macaamiisha ee Shiinaha ee Lenovo ayaa wadaagay qaar ka mid ah sawirrada astaamaha telefoonka iyada oo loo marayo Weibo, oo xaqiijineysa awooddeeda kamarad iyo sawir qaadista illaa 100 MP.
Fulinta ayaa taas xaqiijisay Lenovo Z6 Pro wuxuu la imaan doonaa afar dareemayaal kamarad ah xagga dambe iyo in dareenka ugu weyn ee qaabeynta uu noqon doono 48 megapixels. Waxaa sidoo kale la tilmaamay in taleefanku awood u yeelan doono inuu sawiro ka qaado 100 megapixels xal, sida si fiican ayaa loo maleeyay.
Lenovo Z6 The Pro afar kamaradaha gadaal iman doonaan, oo waxay qaadan doonaan 100 photos MP
Dhawaan ayaa la faafiyay taas mobiilku wuxuu la imaan doonaa shaashad biyo-soo-saar leh wuxuuna bixin doonaa saamiga shaashadda-jirka ee 90%. Intaas waxaa sii dheer, taleefanka ayaa sidoo kale la imaan doona shaashad sawir qaade ah.
Todobaadkii hore, fulinta shirkadda posted shaashadda ka mid ah astaanta network telefoonka ee Weibo, isagoo xaqiijiyay in Z6 Pro wuxuu sidoo kale soo bandhigi doonaa taageerada isku xirnaanta 5G.
Sida la filayo, aaladda waxaa ku shaqeeyn doona Qualcomm's chipset-kii ugu dambeeyay uguna weynaa, the Snapdragon 855, taas oo ka dhigaysa shirkadda labaad ee casriga ah ee shirkadda isticmaasho Chipset-kan kadib Lenovo Z5 ProGT, kaas oo sidoo kale bixiya ilaa 12GB oo RAM ah.
Xilligan, ma jiro macluumaad dheeraad ah oo laga heli karo arrintan flagship ka. Si kastaba ha noqotee, kaliya dhowr maalmood ilaa taariikhda la siidaayo, sidaa darteed maahan inaan sugno waqti dheer kahor intaanan hubin dhammaan faahfaahinteeda, iyo sidoo kale qiimaheeda iyo helitaankeeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Lenovo Z6 Pro wuxuu qaadi doonaa 100 sawir oo sawir ah mahadnaqa shaqada afartiisa kamaradood ee gadaal ah
BlackBerry Messenger waxay xirmaysaa albaabada dhamaadka May